DLULA IBell 222A FSX & P3D - Rikoooo
Play 6 903
Umbhali: Eagle Rotorcraft Sekusetshenziswa
I-Bell 222A ingumphumela weminyaka engaba ngu-3 yomsebenzi onzima nokuzinikezela. Le phrojekthi yaqhubeka nokulibaziseka okuningi futhi yayiyindlela yokunciphisa ukucindezeleka ngesikhathi kubulawa amalungu ambalwa omndeni nabangane beqembu le-ERS. I-Eagle Rotorcraft Simulations iyaziqhenya ngokuthi ekugcineni ikwazi ukuletha i-222A izilaleli. Ngenkathi kukhona ukuthuthukiswa okuzayo okuzayo esikhathini esizayo, ukukhululwa kwamanje kuhamba ngokugcwele futhi kuyasetshenziswa.
Ukuqala okusheshayo kwezinjini ukubona ividiyo idalwe yi-Rikoooo ngezansi kwekhasi.
Ukufunda le ncwadi kubalulekile, ifomethi ye-PDF.
• Amabalazwe okuzithobayo, ama-maps, namabalazwe acacile
• FSX Izithombe ezikhethekile
• I-1 yekhwalithi ephezulu yezinga eliphezulu neyaphakathi
• Ama-liveries angaphandle angama-4 angaphandle
• I-DirectX iyahambisana
• Isifiso sokuqalisa uhlelo
• Isethi yekhwalithi ephezulu
Inqubo Yokuqalisa Injini Yokuqalisa
I-Bell X-22A FSX & P3D
I-Bell-Boeing i-MV-22B i-Osprey FSX-A & P3D 2.0
I-AH-1W i-Super Cobra AlphaSim FSX
I-Bell HC412 Bambi Bucket No Doors FSX